Waxaan Usoo Joogay Dhacdooyin Badan Oo Cajiib ah, Qeybta Labaad iyo 3 Dhacdoo Yaab Leh | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: September 1, 2014, 12:00 am
Konteenarki gubtay! (4)
Dukaankaan wuxuu ahaa nooca konteenarrada, Ilaahay mahaddi si nabad ah ayaan u xirannay habeenki. Casho iyo sheeko kadibna waan jiifannay. Habeenki marki uu kala bar tagay ayaan ku soo baraarugay kulayl iyo hur hawada naga qabsaday. Haddii aan soo kacay waxaan arkay holac gudaha soo galaayo oo banaanka ka imaanayo. Waan isku naxay, waxaan ku qayliyey saaxiibkay. Koranta ma jirin waxaa iftiin noo ahaa holaca banaanka ka imaanayo gudahana ku soo faafayo. Waxaan raadinnay furihi.
Cabbaar kadib waxaan furnay qufulki ku xirnaa albaabka konteenarka. Nasiib xumase, haddii aan riixnay, albaabki wuu furmi waayay. waxaan dareennay in kor nalooga xidhay. Allahul Mustacaan. Waxaan isku diyaarinnay geeri. gadaal waxaa kasoo siqaayay holac iyo qiic. Mugdiga waxaa noo wehliyey qaaca. qufac ayaan weheshannay, birti konteenarkana way wada kululaatay. Qayli haddii aan isku dayi lahayn qof na maqli karay ma jirin oo meeshuba qam ayay ahayd.
Halkaas ayaa iigu danbaysay waxa aan ka xasuusto xaaladdi aan caadiga ahayn iyo noloshi konteenarka dhaxdiisa. Waxaan ku soo baraarugay anigoo isbitaal jiifo maalin kadib dhacdadi. Gacmaha, lugaha iyo qaybo badan oo jirkayga kamid ah waxaa ku duubnaa faashado, dhaawacyadi isoo gaaray habeenkaasna wali way ka muuqdaan jirkayga mar walba oo ay ishaydu ku dhacdana waxay isoo xasuusiyaan saaxiibkay oo habeenki meesha ku geeriyooday.
Dilki ugu Xanuunka Badnaa! (5)
Dhexbartamihi sanadki 2008-da, xaafadda mayfair ee ay soomaalida ka degto magaalada johanesburg gaar ahaan masjidka Imaamu shaafici. maalin jimcaha waxaa ka istaagay shiekh Maxamed Amiin oo dadka usoo gudbiyey warki ugu naxdinta badnaa ugu qaraaraa ugu xumaa. Wuxuu shiikha sheegay dhacdo ugub ahayd oo ka dhacday gobolka port-elizabeth.
Tuulo lagu magacaabo Queens Town, waxaa dukaan ku lahaa qoys soomaaliyeed oo ka koobnaa hooyo iyo saddex carruur ah oo ay dhashay. Aabaha qoyska wuu ka maqnaa dalka. Soomaalida horey u meysan aqoonin in ay qoys ahaan u degaan tuulooyinka. Waxaana u badnaa nolosha tuulooyinka dhalinyaro koox koox u furato dukaamo yar yar iyo kuwa waaweynba.
Waxaa la sheegay, gabar yar oo ka mid ahayd qoyskaan in ay horey u kufsadeen rag ka mid ahaa deegaanka isla markaana ay socotay maxkamad in muddo ah soo jiitameysay. Falka foosha xun ee lagu laayay qoyskana ay ka danbeysay sidi loo soo afjari lahaa maxkamadda raggaa ku socotay.
Saqdi dhexe habeennimo, waxay gacan ku dhiiglayaashi arxanka darnaa soo galeen gurigi ay degnaayeen qoyska. Iyagoo ku hubeysan budad, midiyo iyo seefo. Dagaal ayaa meeshi ka dhacay ilaa laga awood badiyey qoyski halkina lagu jar jaray hilbahoodi. Subixi oo la tagey goobta waxaa loogu tagey dhiig u qulqulaayay sidi daadka. Waxay ahayd goob murugo leh oo uu ka dhacay fal arxan daarra ah qof walba oo tageyna uu aad uga qarracmay. Xubnihi jidhka dadki meesha lagu jarjaray ayaa meel walba warnaa; xagga waxaa ka muuqdo gacan, madax, lug dhanka kale dheg far kaligeed meel taal wuxuu ahaa jawi aan la suureen karin dugaagnimada dadki falkaa geystayna ka tarjumaayay. Waxaa ugu darnaa oo sida ugu axmaqsaneyd loo jarjaray hooyadi qoyska iyo wiilki cidda ugu weynaa oo loo maleynayo in ay dagaallameen ayadoo aysan meesha ka marneyn in ay burcadda isku dayday in ay kufsadaan hooyada iyo gabadhi yareyd.
Wixi maalinkaas ka danbeeyey waxaa yaraaday qoysaski u deegaamaysi tagi jiray tuulooyinka. Sida caadiga ahna qoyska waxaa la dejiyaa magaalada halka ragga ay inta badan u shaqo tagaan tuulooyinka.
Qabyaaladdu Qiil Malahan! (6)
Safar saacado qaadanayo ayaan isku diyaariyey. waliba waxaan u xushay habeenki in aan sii guureeyo si aan aroor hore ugu aado howlahaygana u gudo galo;waqtiga aan haystay oo yaraa awgii.
Magaalada aan usocdo dhawr boqol oo kilomiter ayey u jirtaa middaan joogo. Dalku waa dhul uu aad danbigu (Crime) ugu badanyahay, burcadda caadiga ah iyo burcadda sharciyeysanbo (police-ka) aad ayaa looga baqaa. Markaan sidaa leeyahay ku been abuuran maayo ee waa wax sheeko iyo shaahidba aan ku hayo.
In aan faahfaahin dheer iyo faallo ka bixiyana waxaad kaga deeqtoomeysaa markaan qalinka ku xarriiqo ama magac dhabo dalka aan ka warramayo; Koonfur Afrika kawaanka Soomaalida.
Dhawr toddobaad ka hor ayey ahayd markey dhalinyaro ay dhacayeen kulahaayeen kaddib markey u cawdeen, Yes We Are Police but our problem is the Money.
Gaariga aan ku safrayo kaligey ayaa (soomaali) ka saaran ama (Makuulla) oo dalkaan looga yaqaan Hindida, Soomaalida iyo dadka la midka ah halka caddaanka looga yaqaanno Mulungu. Waxaan u egahay neef ari ah oo waraabe geed loogu xidhay hadbo mid cabitaan kulul ka soo dhergay ayaa si naxariis darro ah ii soo eegayo. Markaas waxaa maskaxda kaaga soo dhacayo dhibaatooyin iyo falal tiiraanyo reebay.
Waxaa kugu soo dhacayo Mid asagoo isleh Taxi-sigaan horey ugu sii gaar halki aad u baahneyd kadibna marki uu farta u taagtay ee loo istaagay ay xaaladda ku xumaatay, wixi uu dadka u maleeyayna dugaag dad cun ah ay ku noqdeen kaddib marki bilooyin la’laaa raq iyo ruuxba laga dhex helay firiijyada meydka lagu keydiyo asagoo dulduleelo oo kalyihii iyo xubno kale oo jirkiisa ka mid ah lagala baxay!
Waxaad soo goconeysaa kuwo nolosha lagu gubay, qoys dhan oo hilibkoodi cad cad loo jarjaray, Gabar xaamilo ah oo bisheedi ugu danbeysay ku. Jirto, kaddib marki la kufsaday neefta lagu dhajiyey oo sidaa lagu dilay, qaar la sixray adduunna ka tagay aakhirana aan gaarin iyo… Iyo.
Anigi oo sidaa u fekerayo. Waxaan ku baraarugay baski oo istaagay halki yoolku ahaa isla markibo intaan laga warhelin kummaan ahay iyo halkaan usii socdo, taxi yar ayaan ku dhacay. Waa xilli habeeki intiisi badneyd tagay salaaddi subaxna soo dhawaatay.
Meel aan ku ogaa in uu hoteel ay soomaalidu leedahay ku yaallo ayaan taxi-gi uga degay. Magaaladu marki iigu danbeysay soomaalida kuma badnayn, halkaan hoteelka ayey iskugu imaan jireen lakin subixi ayaan ogaaday in si fiican meesha loo soo degay goobo ganacsi oo badanna laga furay.
Waxaan hortaaganahay albaabki hoteelka. Waa lawada hurdaa. Saacaddaan cid kaafureyso malahan, xilliga iyo duruufo jiro owgood! Anigiyoo sidi marna albaabka u qaraacayo marna iska eegayo darbi jiif meel aan iga dheerayn ka quurinayo, waxaa meel hortayda ah ka soo muuqatay islaan sidi hablaheenna u labbisan. Neefbaa iga soo boodday alleylehe midd kheyreysan ayaa soo muuqatay ayaan niyadda ka idhi.
Isbariidin kaddib, waxaan waydiiyey hotelki soomaalida soomaahan halkani? Ayadoo furo lasoo baxayso ayey igu tiri haaye hoteelkee rabtay? Kan Soomaalida, ayaan si kalsooni ku jirto u iri aniga oo isleh si fiican kuumeysan maqal!…
Si codki hore ka badalan ayadoo u hadleyso ayey igu tidhi: haddee soomaalida wey badantahaye keed rabtaa; hoteelka reer qurac miyaa ama kan reer qansax ama kii reer ciid. Anigiyoo yaabban oo isbarbardhigayo xaaladda ay ku sugantahay soomaalida halkaan ku nool iyo sida hoose oo ay u fikirayaan, ayaa waxaan ku iri midkuu doonabe’e ina gali. daal iyo dhafarki xala dartii sariir ayaan isku tuuray nasiib darrase waxaan ka gam’i waayay ragg iyagguna xala meesha kula dhafray daroogada cagaaran kaaga darrane halku-dhigga dooddoodu waxuu ahaa innaga oo reer gugac ah sidey noo maamuli karaan reer qansax.
Howshi aan magaalada ka lahaa ayaan ku kallahay waana ka soo dhamaaday magaaladi anigoo dib ugu soo laabtay magaaladi aan ka tagay. Waaba xaafaddi Soomaalida oo aan xaaladdeeda caadi ahayn. meel walba waxaa gaari qafilan la taagan burcaddi sharciyeysnayd. haddii aan xog wareystay soomaalida meelaha taagtaagnayd waxaa la ii sheegay in xala xaafadda eber la isaga dhigay oo bud, toorrey iyo seef xaloo dhan la isku raacdeysanaayay ayadoo reer Qansax iyo reer Qurac aysan waxbo isku reeban. Allaw ur ubixi inta aan kashka ka iri ayaan lugaha sii jiitay.
Walaallo Isnacay Wey Xoolo Yareeyaan
Wayna Xaabaallo Badiyaan.
La soco qeybaha danbe iyo kobciyemedia.com
W/Q:-Mohamed H. Biikole